Ku saabsan Annaga-Fiican Qasabadaha Jikada 2020 | Tubooyinka Ugu Jikada Fiican | Qasabada jikada
Bogga ugu weyn / Nagu saabsan
WOWOW, waxaan aaminsanahay inaad u qalanto sida ugu fiican. Iyada oo qayb ka ah himilooyinkeena bilowga ah ee ah in la noqdo, shirkaddeena waxaa ka go'an inay ku siiso waxkasta oo aan ku bixin karno: qiimaha ugu fiican, badeecada ugu fiican, wax soo saarka casriga ugu fiican, iyo dhamaan adeegsiga macaamiisha ugu wanaagsan ee sameyn doona. waxaad dareemaysaa inaad tahay boqortooyo.
Anagoo ku sugnayn suuqa ilaa 2008, shirkadayada waalidka waxay had iyo jeer ku dadaalaa inay bixiso alaab tayo leh. Sanadihii la soo dhaafay, waxaan si taxaddar leh oo ula kac ah u ballaarinnay aruurintayada oo aan ku soo darnay wax walba oo aan uga heli karno gurigaaga:
• Qalabka jikada: Tuubbooyinka jikada iyo qalabka casriga ah, habeysan oo tayo leh. Hoos u soo jiido qasabadaha jikada ee buuxiya shuruudaha qoyska ee casriga ah ee ficil ahaaneed iyo sidoo kale xirfad ku habboon qaabeynta.
• Qalabka musqusha: Waxaan u qaadnaa isla xirfaddan oo waxaan ku dabaqnaa wax kasta iyo dhammaan musqulaha sidoo kale. Laga soo bilaabo tubooyinka qasabada ilaa alaabada musqusha sida shukumaannada iyo waraaqaha warqadaha musqusha ilaa nadaamka musqulaha oo buuxa, waxaa lagu bixiyaa qaab aad rabto.
Waxaan ula qabsanaa sida nidaamyadeena maaraynta tayada ay u dhaqmaan. Si loo bixiyo baahiyahaaga, waxaan had iyo jeer sameyn doonnaa wixii aan kari karno si aan u soo saarno tubooyinka ugu wanaagsan, qalabka iyo waxyaabaha kale ee ugu habboon, oo ay la socdaan dhammaan agabka ugu wanaagsan, dhammaantood iyadoo aan wali hayno sicir qiimo hooseeya si aad u heli karto xirmo buuxa oo run ah.
Diyaar ma u tahay in la sameeyo WOWOW rugtaada taga-soo-saareyaasha soosaarayaasha tayada leh? Nagala soo xiriir maanta [faahfaahinta xiriirka] oo bilow safarkaaga.
* Keeba kuu furaya: jikada musqusha qubeyska
* Loo baahan yahay.Fadlan buuxi faahfaahinta aad rabto inaad ogaato sida qeexida alaabada, qiimaha, MOQ, iwm.